Izinzuzo ze-Oats Zempilo Yonke: Konke Odinga Ukukwazi - Ezempilo
Izinzuzo ze-Oats Zempilo Yonke: Konke Odinga Ukukwazi
Oats Benefits Overall Health
Igcwele isitashi nefayibha, amaprotheni asezingeni eliphakeme, namavithamini amaningana namaminerali afana nama-B B, i-iron, i-manganese, i-magnetic, i-phosphorus, i-zinc, ithusi ne-selenium, kunezinye izinhlamvu ezimbalwa kune-oats ezinomsoco. Izinzuzo ze-oats zempilo yonke ziningi, futhi akusizi ngalutho ukuthi lokhu okusanhlamvu okubalulekile kukhulunywa ngakho kakhulu. Funda ukuze wazi ukuthi ama-oats angayizuzisa kanjani impilo.
1. Oats Izinzuzo Zesifo Sikashukela
ezimbili. Izinzuzo ze-Oats Zokwehlisa Isisindo
3. Oats Izinzuzo Zenhliziyo
Isine. Izinzuzo ze-Oats zokunyakaza kwamathumbu
5. Imibuzo evame ukubuzwa kuma-Oats
Oats Izinzuzo Zesifo Sikashukela
Isazi sokudla okunomsoco uDt Hetal Saraiya uthi, “Ama-oats acebile ngesitashi nefayibha, okungama-carbohydrate, i-macronutrient eyintandokazi yomzimba ukuthola amandla kusuka . I-fiber ibaluleke kakhulu kulabo abanesifo sikashukela, njengoba iqukethe uhlobo oluthile lwe-fiber encibilikayo, i-beta-glucan. Le fiber yandisa isikhathi esithathwa ngumzimba wakho ukugaya ukudla, ngaleyo ndlela kubambezele ukukhishwa kweshukela likashukela egazini. Ngu ukuvimbela ushukela wegazi ama-spikes emathunjini amancane, okuqukethwe i-fiber ephezulu kuma-oats kungasiza ukuphatha isifo sikashukela. ”
USaraiya wengeza ukuthi izinzuzo ze-oats kwezempilo zibandakanya ukusiza ukunciphisa ukuvuvukala, okuluhlobo lwendlela yokuvikela umzimba yemvelo. Uthi, “Ukuvuvukala kwesifo sikashukela, okungaholela ekwandeni kwezifo, kungancipha ngokudla i-oats. Lokhu kungenxa yama-avenanthramide, amakhemikhali asenhlamvu anezinto ezilwa nokuvuvukala. ”
Ithiphu: Ama-oats angenye ye- ukudla okunempilo ungadla ukubhekana nesifo sikashukela.
Izinzuzo ze-Oats Zokwehlisa Isisindo
Kalula nje, ama-oats ayindlela yokudla yokugcwalisa, kungaba ngebhulakufesi, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa. Kuthatha isikhashana ukugaya, ngakho-ke kukugcina uzizwa ugcwele isikhathi eside, kukuvimbela ekuzidleni ngokudla okungenampilo. I-Beta-glucan, ikakhulukazi, yaziwa ngokukhuthaza ukukhishwa kwe-peptide YY (PYY), okuwuhlobo lwe-hormone esuthi. Le hormone ikhiqizwa emathunjini futhi kukhonjisiwe ukuthi isiza ukunciphisa ukudliwa kwekhalori nokunciphisa ubungozi bokukhuluphala.
Ithiphu: Faka oats ezinhlelweni zakho zokudla uma ufuna ukunciphisa umzimba ngenkathi ukudla okunempilo , ukugcwalisa ukudla.
Oats Izinzuzo Zenhliziyo
Khumbula amakhemikhali ama-aordhramide okukhulunywe ngawo ekuqaleni? Lokhu empeleni kuyiqembu lama-antioxidants ayingqayizivele anikezelayo izinzuzo ze-oats ngenhliziyo enempilo ngokwandisa ukukhiqizwa kwe-nitric oxide. Le gesi ivula imithambo yegazi, iholele ekwehliseni umfutho wegazi nasekuthuthukiseni ukuhamba kwegazi.
USaraiya uyanezela, “Okuqukethwe yi-fiber encibilikayo ku-oatmeal kunciphisa i-cholesterol ephansi kakhulu (LDL), eyaziwa nangokuthi i-cholesterol embi. I-fiber encibilikayo inciphisa nokungena kwe-cholesterol egazini. ”
Ithiphu: Khulisa ukudla kwakho i-fiber ngokungeza izithelo ezintsha ku- isitsha sakho se-oatmeal .
Izinzuzo ze-Oats zokunyakaza kwamathumbu
Unenkinga yokugcina njalo noma ubhekene nokuqunjelwa? Oats ukutakula! I-oat bran, ekhiqizwa kusuka ezingxenyeni ezingaphandle zama-oats, igcwele i-fiber encibilikayo nengancibiliki, okwenza kube i-laxative yemvelo enhle kakhulu.
I-fiber encibilikayo ichitheka emanzini yenze into efana ne-gel, futhi isiza ukwehlisa amazinga egazi egazini noshukela wegazi. Ngakolunye uhlangothi, i-fiber engafakwanga yengeza inqwaba esitokisini, ikhuthaza ukuhamba kwayo ngomgudu wokugaya ukudla. Ukudla ukudla okune-fiber eningi akukwazi nje ukujwayela ukunyakaza kwamathumbu, kepha futhi kusiza ekugcineni impilo yamathumbu ngokwehlisa ubungozi be-haemorrhoids, isifo se-diverticular, kanye umdlavuza obomvu .
Bheka leli shadi ukuthola eminye imininingwane ngokuqukethwe kwezakhi zama-oats.
Ithiphu: I-fiber e-Soluble ne-insoluble ibalulekile ngendlela yayo yezempilo. Ukungeza ama-oats kufayela lakho le- Ukudla kukunikeza isilinganiso esinempilo yazo zombili izinhlobo zefayibha yokudla.
Imibuzo evame ukubuzwa kuma-Oats
U. Ziyini izinhlobo ze-oats?
TO. Ungadla ama-oats kunoma yiluphi uhlobo lwamafomu atholakala kulo. USaraiya wabelana ngemininingwane ngezinhlobo ukuze ukwazi thola izinzuzo ze-oats kwezempilo:
- Ama-oats anqunywe ngensimbi noma ama-oats ase-Ireland: Lezi zinkulu ngosayizi futhi zithatha isikhathi eside ukupheka kunezinye izinhlobo zama-oats. Yizicucu ezicutshungulwa kancane kunawo wonke ama-oats, futhi ngenxa yalokho, zilungele kakhulu labo abanesifo sikashukela sohlobo 2.
- Ama-oats asongwe: Lolu hlobo lwama-oats luyashiswa futhi lubhebhethwe ukudala ama-oat flakes amancane kunalokhu futhi apheke ngokushesha kunama-oats anqunywe ngensimbi. Njengoba ziphekwe kancane, zingakhuphula amazinga kashukela egazini lakho ngokushesha okukhulu.
- Ama-oats asheshayo: Lawa ashubile isikhathi eside ngesikhathi sokucubungula bese efakwa kuma-flakes amancane. Lokhu kunciphisa isikhathi sokupheka, kepha futhi kuholela ekukhuleni okubukhali emazingeni kashukela egazini.
U. Iyini imiphumela emibi yokudla i-oats?
TO. Ama-oats agcwele ifayibha, futhi ukudla ukudla okunefayibha ephezulu kungadala igesi emathunjini nokuqunjelwa. Izinzuzo ze-oats zezempilo ziningi, kepha ukunciphisa le miphumela emibi, qala ukudla ama-oats noma yikuphi ukudla okunemicu ephezulu kancane kancane, ukwandisa umthamo kancane.
Ngaphezu kwalokhu, gwema ukudla ama-oats uma unezinkinga zomgudu wokugaya ukudla onweba isikhathi esithatha wena ukugaya ukudla, ngoba lokhu okusanhlamvu kungavimba amathumbu.
Khumbula ukuthi ama-oats angukudla okunama-khalori aphansi, ngakho-ke ungawenzi ngokweqile emizameni yokwehlisa isisindo. Futhi, ama-oats angaholela ekuzuzeni ukuphakama uma ungaqaphile. Gwema:
Ukungeza ushukela omningi ku-oatmeal yakho
Ukudla i-oatmeal yangaphambi kokupakishwa egcwele ushukela
Ukungeza ama-toppings angalungile njengama-chocolate chips
Ukungeza okokufaka okuningi okunempilo, isibonelo, izithelo ezomisiwe namantongomane anama-calories amaningi
Funda kabanzi: Zama Lezi Easy Oats Ungadliwa!
ukuzivocavoca ukushisa amafutha esiswini ngokushesha
ukuzivocavoca ukunciphisa isisu esingezansi
amathiphu okukhula okuhle kwezinwele
isoda yokubhaka izinduna ubusuku bonke
Ngingazilawula kanjani izinwele zami ziwe
amakhambi asuswa unwele unomphela